ဝေဒနာခံစားနေရပုံ.. လူပြည်မှာနေဖို့ အချိန်ဘာမှ မကျန်တော့ဘူး (နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နာရီကြည့်နေစဉ်)
တရုတ်ပြည်ကို အလည် အပတ်ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဓာတ်ပုံ တစ်ချို့ပါ.. စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ဂျုံးဂျုံးကြနေပုံ ပေါ်နေတာ ပုံတွေကို သေချာကြည့်ရင် တွေ့နိုင်ပါတယ်..။ အိန္ဒိယခရီးစဉ်ထက် အခြေအနေပိုဆိုးနေတဲ့ ပုံပါပဲ... ဒီတောင်ကို မောင်ကျော်နိုင်ပါ့မလားပဲ..
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Saturday, September 11, 2010 Links to this post
ကိုလူမော်လတ်.....ခရိုင်မှုးကို တာဝန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ သူတို့စစ်တယ် ကိုအောင်မင်းနိုင်ရော ဒါပေမယ့် သူတို့စစ်တဲ့ထဲမှာ ဖိနပ်ချွတ် ပါးရိုက်တာမပါဘဲ ကျန်နေပါတယ်။ ဒါကို မကြေနပ်လို့ မောင်အောင်မင်းနိုင်က ပြောလာတယ်.. ဒါကြောင့် ပြည်ထဲရေးရုံးကို ထပ်တိုင်တယ်.. ထပ်ပြီး အမှုစစ်ထပ်ဖွဲ့ခိုင်းတယ် ဗဟန်းမြို့နယ်မှုးနဲ့ ... ဗဟန်းမြို့နယ်မှုးရုံးးခန်းမှာ ကျွန်တော်ရော.. ကိုအောင်မင်းနိုင်ပါ.. စစ်တယ် .. ကိုအောင်မင်းနိုင်က သူကိုဖမ်းတာတွေ ချတာတွေ..ဖြစ်စဉ် အသေးစိပ်ကိုပြောပြပါတယ်..ကျွန်တော့်ကိုတော့ မိသားစုဘာလုပ်လဲ။ NLD ပါတီဝင်လား ကျွန်တော်က ကိုအောင်မင်းနိုင်လာပြောလို့ တာဝန်ရှိ လို့လုပ်တာပါ..ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အစည်း (NLD)မှာ.ထိန်ချန် ထားပိုင်ခွင့် မရှိတာတွေ.. ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအရ အကာအကွယ် ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်နေလို့ ရှဉ့်လဲလျှောက်သာ ပျားလဲဆွဲသာအောင် အရှည်မဖြစ်ရအောင် အလုံရဲစခန်းသွား လူကြီးတွေနဲ့တွေ့ပြီး ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်း လုပ်ဖို့ပြောဖို့ သွားတဲ့အကြောင်း ဒါတွေပြောပြီး.. ကိုယ်ပြောတာကို ကိုယ်တာဝန်ယူတဲ့ သဘောပေါ့လေ.. လက်မှတ်ထိုးရတယ်။
ကိုအောင်မင်းနိုင်က သူဖြစ်စဉ်မှာ လက်မှတ်ထိုးရတယ်.. ကျွန်တော်ကလည်း ကိုယ်ပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ ထိုးရတယ် .. ဗဟန်းမြို့နယ်မှုးက အလုံစခန်းမှုး(ဖိနပ်နဲ့ပါးရိုက်သူ) ကိုလဲ ခေါ်မေးတယ်။ ကျွန်တော်က အလုံစခန်းမှုး ဖိနပ်ချွတ်ပါးရိုက်တာ ဟုတ်ပါတယ်လို့.. ပြောပါလားလို့မေးတော့ သူတို့က မပြောဘူး.. ဗဟန်းမြို့နယ်မှုးက မပြောဘူး အဲဒါနဲ့ပြန်လာတယ်.. ဒီနေ့ကြတော့ ၉.၉.၂၀၁၀ ပေါ့လေ..မရမ်းကုန်း မြို့နယ်မှုးက ခေါ်တယ်...ကျွန်တော်ကတော့ လိုက်သွားပါတယ် ..ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကိုတော့ ခေါ်မမေးဘူး... ဖမ်းတဲ့ တပ်ကြပ်ကျော်နိုင်လင်း ကိုမောင်အောင်မင်းနိုင်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် စားပွဲဝိုင်းမှာ ထိုင်ခိုင်းပြီး အလည်က မရမ်းကုန်မြို့နယ်မှုး ကထိုင်တယ် .. ကိုအောင်မင်းနိုင်ကို ရိုက်နှက်တာ သူပါသလားလို့မေးတယ်... ရိုက်တဲ့ထဲမှာ သူမပါဘူး.. ဖမ်းတုန်းကတော့ ပါတယ်လိုဖြေတယ်။ တပ်ကြပ်ကျော်နိုင်လင်းကို မင်း ကိုအောင်မင်းနိုင်ကို ဘာမေးချင်တာရှိလဲတဲ့။ တပ်ကြပ်ကျော်နိုင်လင်း ကဖမ်းတုန်းက အလုံရဲစခန်းမှာ လိပ်စာမေးတော့.. ဒလဆိုတဲ့ အခုတော့ဘာလို့ ကိုလူမော်လတ် လိပ်စာဖြစ်နေရတာလဲတဲ့ ကျွန်တော် မိဘတွေနဲ့နေတာ.. ဒလမှာနေတာပါ.. အခု အလုံရဲက ခဏခဏခေါ်တွေတော့ကိုလူမော်လတ်တို့ အိမ်မှာနေတာပါ။ တွေ့လို့ လွယ်အောင်ပါလို့ ပြောလိုက်တော့ ထပ်မမေးတော့ဘူး..
အဲ့ဒီ၉ရက်နေ့က ကျွန်တော်နဲ့ မောင်အောင်မင်းနိုင် အမေနဲ့က အောက်ကဆိုင်မှာ စောင့်နေတာ.. ပြန်ဆင်းလာတော့ ပြောပြတယ်။ လူကြီးစကားမပြောလို့ မကြေမနပ်ဖြစ်ရတာပါ...။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူကြီးတွေ ရှေ့နေတွေနဲ့ တိုင်ပင်မယ်... အဓိကကတော့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာရယ် ဥပဒေမဲ့ တရားမဲ့လုပ်ရပ်ရယ်.. နောက်အခုလဲ အလုံစခန်းမှုးက ယောင်္ကျားပဲ လုပ်ရင်လုပ်တယ်ပေါ့.. ဘာလို့ သူများကို လှည့်ရမ်းနေတာလဲ. ယောင်္ကျားမပီသဘူးလို့ထင်တယ်..။ ကျွန်တော်ဒီကိစ္စ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ပြေလည်ဖို့ လိုက်လုပ်ပေးနေတာပါ။ အခု စေတနာနဲ့လိုက်လုပ်ပေးတာကို.. မဆိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ ကျွန်တော်ကိုပါ.. စော်ကားလာတာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စကို အထက်ကိုတိုင်မယ် .. ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေအထိပါ စာတင်ပြီး ရေးသားတောင်းဆိုမည်ဟု ကိုလူမော်လတ်မှ ပြောဆိုသွားပါတယ်....။
လူမဆန်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့သော ပဲခူးမြို့မှလူငယ်(၂)ဦးရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုပဲခူးမြို့ခံများလိုက်ပါပို့ဆောင် (ရုပ်သံမြင်ကွင်း)
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, September 11, 2010 Links to this post
ခေါ်ဆိုခထက်ဝက်သက်သာသည့် VOIP ၀န်ဆောင်မှုသစ် ပြည်တွင်းတွင် ၀ယ်ယူနိုင်မည်
လက်ရှိသုံးစွဲလျက်ရှိသည့် Voice Over Internet Protocol (VOIP) ဖုန်းများထက် ဈေးနှုန်းထက်ဝက်သက်သာသည့် Rynga အမည်ရှိ VOIP ဖုန်းအကောင့်ကို ပြည်တွင်းတွင် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်မှ စတင်ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းထိုအကောင့်များကို ရောင်းချပေးသည့် Online Business Group တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ထိုအကောင့်များသည် ခေါ်ဆိုခသက်သာသည့်အပြင် နိုင်ငံအများစု သို့ လေးလတာအတွင်း တစ်ပတ်လျှင် နှစ်နာရီအခမဲ့ပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၀ယ်ယူပြီး Credit များကို မကုန်မချင်းသုံးစွဲနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ “ဖုန်းပြောဆိုခကတော့ အခြား VOIP တွေထက် ဈေးထက်ဝက်သက်သာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေသွင်းရတာ ခက်ခဲမှုရှိတာရယ်၊ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းမှ သုံးနိုင်တာရယ်ကြောင့် မတွင်ကျယ်သေးတာပါ။
အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့အတွက် ပြည်ပရောက် မြန်မာအတော်များများ အသုံးပြုကြပါတယ်” ၎င်းကပြောသည်။ Rynga VOIP ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက www.rynga.com တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အကောင့်ဝယ်ယူ လိုပါက Online Business Group (ဖုန်း-၆၉၀၀၃၁) သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
မြန်မာပြည်တွင်းအများပြည်သူနေရာများတွင် အင်တာနက် လွှင့်တင်ပါက လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လို
စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ဟိုတယ်များအပါအ၀င် အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သည့်နေရာများတွင် လူအများသုံးစွဲနိုင်ရန် အင်တာနက်လွှင့်တင်မည်ဆိုပါက အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုလိုင်စင်အား လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ အခကြေးငွေ ကောက်ခံသည်ဖြစ်စေ၊ မကောက်ခံသည်ဖြစ်စေ အဆိုပါလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ဆိုသည်။ အဆိုပါ လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော နေရာများတွင် အင်တာနက်လွှင့်တင်ထားသူများကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက စစ်ဆေးအရေးယူဖွယ်ရာရှိကြောင်း သိရှိရသည်.။
မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်ခေတ်မှာ တတ်လဲတတ်နိုင်ကြပါပေတယ် ခုတမျိုးနောက်တော့လဲတမျိုး မရိုးရပါလား
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အဖွဲ့ဝင်အချို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည်
မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ အသင်းဝင်အချို့သည် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီကို ကိုယ်စားပြု၍ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ၀င်ရောက်အရွေးခံကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာခင်ရွှေ (ဇေကမ္ဘာဆောက်လုပ်ရေး) အပါအ၀င် ဦးဌေးမြင့် (ယုဇနဆောက်လုပ်ရေး)၊ ဦးရန်ဝင်း (အေ၀မ်း ဆောက်လုပ်ရေး) နှင့် ဦးတင့် ဆန်း (အေစီအီးဆောက်လုပ် ရေး) တို့ ပါဝင်အရွေးခံမည်ဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ သည့် အသင်းနှစ်ပတ်လည်အစည်း အဝေးတွင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးကိုကိုထွေးက ပြော ကြားသည်။
ယခင်က အသင်းကြီးများ၏ စည်းမျဉ်း များတွင် နိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော်လည်း ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ပြန်လည်ပြု ပြင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုကြေညာခဲ့သည်။
"နိုင်ငံတကာမှာလည်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တွေ နိုင်ငံရေးမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံလည်း မရှိဘူးလေ။ အခု အသင်းက လုပ်ငန်းရှင်တွေစုပြီး ဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့ အစည်း၊ ပါတီနိုင်ငံရေးမလုပ်ရဘူးလို့ ဆက်ထား ရင် သဘောထားတွေ ကွဲလွဲ လာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အခုလုပ်ခွင့်ရှိ အောင် လုပ်ပေးတာပါ။ အသင်းကနေ ထွက်သွားစရာ မလိုပါဘူး။ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်"ဟု ဦးကိုကိုထွေး က ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည် များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်တွင်လည်း အသင်းဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်များသည် ရွေး ကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ကတည်းကပင် အသင်းဖွဲ့စည်း ပုံကို ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် အသင်းဝင်များအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသော်လည်း အသင်း မှ နုတ်ထွက်ရန်မလိုကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဒေါက်တာ ခင်ရွှေက ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ် တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉) (တွံတေး၊ ကော့မှူး၊ ကွမ်းခြံကုန်း မြို့နယ်များ)တွင် အရွေးခံမည်ဖြစ်သည်။
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း နိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းစရာ မလိုတော့
မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ( MCEA) စည်းမျဉ်းပါ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များ နိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းရမည်ဆိုသည့် အသင်းစည်းမျဉ်း ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန် အတည်ပြုလိုက်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၄ ရက် ဒွါဒသမ အကြိမ်နှစ်ပတ်လည် အသင်းသား စုံညီနှစ်ပတ်လည်ပွဲတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။ MCEA ၏ အသင်းအဖွဲ့ စည်းမျဉ်းပါ အပိုဒ် ၄၀ အရ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များ၏ အရည်အချင်းပါ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုတွင် ပါဝင်ခြင်း မရှိသူဖြစ်ရမည်ဆိုသည့် စာပိုဒ်ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန် ခွင့်ပြုချက်ကို အသင်းသားစုံညီ အစည်းအဝေးပွဲတွင် အတည်ပြုပေးပါရန် အသင်းသားများ၏ သဘောတူညီမှုကို တောင်းခံခဲ့ရာ အသင်းသားများမှ သဘောတူ အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း Popular News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, September 10, 2010 Links to this post
ရပ်ကွက်များအတွင်းရှိ နေအိမ်များသို့ နယ်မှလာသည့် ရွေ့လျားဈေးသည်အသွင်ဖြင့် အညာဒေသ ထွက်ကုန်များအား လိမ်လည် ရောင်းချမှုများရှိနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရွေ့လျားဈေးသည်များ အသွင်ဖြင့် တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်း အပြင် အုပ်စုလိုက်လိမ်လည်မှုများလည်း ရှိနေကြောင်းကိုယ်တိုင်ကြုံ တွေ့ခဲ့ရသူများထံမှ သိရှိရပါသည်။
"ပထမတော့ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် ထဲပါ။ နယ်ကပါလာတဲ့ ဆန်တွေရောင်းဖို့ပါတယ်ဆိုပြီး နမူနာပြ လာစပ်ပါတယ်။ ဆန်ကိုကြည့်လိုက်တော့ ကောင်းပြီးဈေးနှုန်းကလည်း လက်ရှိပေါက်ဈေးထက် တစ်ပြည်ကို ၂၀၀ ကျပ် သက်သာနေပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်း ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့အပြင် ဆိုင်မှာလည်း သွားဝယ်စရာမလိုဘူး။ နေကလည်းပူနေတော့ ဆန်လာစပ်တဲ့ အမျိုးသမီးကိုလည်းအားနာပြီး သနားတာနဲ့ယူမယ်ဆိုပြီး ဈေးနှုန်းညှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဆန်သွားယူမယ်ဆိုပြီး အပြင်ခဏ ထွက်သွားပါတယ်။ ခဏနေတော့ အဖော်ယောက်ျားတစ်ယောက် ဆန်အိတ်ထမ်းပြီး ပါလာပါတယ်။ အန်တီတို့က ဆန် ၁၀ပြည် ၀ယ်လိုက်တယ်။ ဆန်ဖိုးငွေရှင်းပြီး ပြန်သွားတယ်။ ဆန်ကိုပြန်ချိန် ကြည့်တော့ဆန် ၁၀ ပြည်ဝယ်တာ ၆ ပြည် ကျော်ကျော်လေးပဲရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ခြင်တောင်းကို လည်း စစ်ပြီးမှဝယ်တာပါ။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ အပြည့်ချိန်ပေးခဲ့ပေမယ့် ခြင်တောင်းမှာ အတိုးအလျှော့လုပ်နိုင် အောင်လျှာခံထားနိုင်တယ် ဆိုတာကို လုံးဝမစဉ်းစားလိုက်မိဘူး။ လိမ်သွားတယ်ဆိုတာ နောက်မှသိရတော့တယ်"ဟု ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူ တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့ပါသည်။
နယ်မှလာသည့် ရွေ့လျားဈေးသည်အသွင်ဖြင့် ဆန်၊ သနပ်ခါး၊ ငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ ငံပြာရည်နှင့် အညာဒေသထွက်ကုန် ပစ္စည်းများအစ ရှိသည်တို့ကို လိမ်လည်၍ရောင်းချသည့် ဖြစ်ရပ်များမှာ ဆင်ခြေဖုန်း ရပ်ကွက်များတွင် သာမက မြို့သစ် မြို့နယ်များအပါအ၀င် အချို့သော မြို့နယ်များတွင်လည်း အလားတူ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
"ဒီအဖြစ်မျိုးတွေက ခဏခဏ ဖြစ်နေပါတယ်။ လူတွေကလည်း ဈေးသက်သာတယ်။ ပစ္စည်းကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဘာကြောင့်ဒီလိုလျှော့ရောင်းရတာလဲ ဆိုတာကိုမစဉ်းစားဘဲ နေအိမ်တွေထဲကို အလွယ်တကူ ၀င်ခွင့်ပေးကြတယ်။ ကိုယ့်အိမ်ထဲကို သူစိမ်းတွေ၊ အကြောင်းမသိတဲ့သူ တွေကို ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့မှ ခေါ်ဖို့မသင့်ပါဘူး။ လူတိုင်းကို လည်းအလွယ်တကူနဲ့ မယုံကြည်သင့် ပါဘူး။ လူလိမ်အများစုက ရိုးသားတဲ့ပုံစံဖမ်းပြီး သားကောင်တွေရှာတတ် ပါတယ်။ အခုလိုကိစ္စမျိုးမှာ အမှန် တကယ်ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ ကျေးလက် ဒေသခံတွေအတွက် များစွာ နစ်နာမှု တွေရှိပါတယ်"ဟု အငြိမ်းစား ရဲ ၀န်ထမ်းဟောင်းတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့ ပါသည်။
ရပ်ကွက်များရှိ နေအိမ်များတွင်လည်း တံခါးများလုံခြုံစွာ ပိတ်ထားကြရန်နှင့် လူစိမ်းလာပါက အလွယ်တကူမဖွင့်ပေးကြရန်၊ အိမ်စောင့် ကျန်ရစ်ခဲ့သူများ အနေဖြင့်လည်း မပေါ့ဆကြဘဲ အထူးသတိရှိကြရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်လူကြီးများက သတိပေး ပြောကြားမှုများပြုလုပ်ကြကြောင်း ကို eleven ဂျာနယ် တွင်ဖော်ပြထားပါသည်.။
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဖက်နယ်စပ် မောင်းတောမြို့နယ်စံပြကျေးရွာ ကလေးများတောင်းရမ်းစားသောက်နေရ
တောင်းရမ်း စားသောက် နေကြရတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ နတလ စံပြကျေးရွာရှိ ကလေးများ
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဖက်နယ်စပ် မောင်းတောမြို့နယ်မှာ အစိုးရစီမံကိန်းနဲ့ တည်ထောင်ထားတဲ့ စံပြကျေးရွာတွေမှာ အစားအစာမလုံလောက်လို့ ကလေးငယ်တွေက နီးစပ်ရာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဆီသွားပြီး စားစရာတောင်းနေကြရပါတယ်။
“နတလ စံပြကျေးရွာက ကလေး အယောက် ၂၀ က နေ ၃၀ လောက်ရှိရာက အခုတလော အယောက် ၅၀ လောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ လာပြီး အလှူခံတာပေါ့လေ လာတောင်းကြတာပေါ့ ” လို့ မျက်မြင်တွေ့မြင်သူ တစ်ဦးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
နတလ စံပြ ကျေးရွာ တွေဆိုတာ ဗမာပြည်ဘက်က အစိုးရ အစီစဉ်နဲ့ ပြောင်းရွေ့လာရောက် နေထိုင်ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ နယ်စပ်ဒေသနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်နဲ့ နတလ စံပြကျေးရွာတွေကို တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မောင်းတော မြို့နယ် တစ်ခုထဲမှာ တင် ရွာ ၂၀ ရှိပါတယ်။ ဒီရွာတွေမှာ အလုပ်အကိုင် မရှိသူများပြားပြီး ကုန်ဈေးနှုန်းကလည်း ကြီးမြင့်လို့ ထမင်းနပ်မှန်အောင် မစားနိုင်ဘူး ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အခုလို တောင်းစားသောက်တဲ့ ကလေးတွေ ပိုပြီး များလာနေတာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့ဘူးသော ရှိလို့ရှိ မှန်းမသိတဲ့အစိုးရကအကောင်းဆုံးဘဲဆိုခြင်းအားကိုနေဇော်နိုင်က အခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, September 09, 2010 Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုက္ကဌ ဦးတင်ဦး ညီဖြစ်သော ဦးစိန်အောင်၏ ဈာပနာ..
ဘဘ ဦးတင်ဦး၏ ညီ ကွယ်လွန်ရှာပြီ
လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး မိတ်ဆွေရန်သူမရွေး တို့၏ နာရေးကိစ္စ အ၀၀တို့ကို ထမ်းဆောင်ဖေးမ ကူညီပံ့ပိုးပေးနေသော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် ၆.၉.၂၀၁၀ (တနင်္လာ) နေ့တွင် ဘဘ ဦးတင်ဦး၏ ညီအရင်းဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သူ ဦးစိန်အောင် အသက် (၈၃) နှစ် ရုပ်အလောင်းအား ရန်ကင်းမြို့နယ်နေအိမ်မှ ရေဝေးသုဿန် အအေးခန်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၈.၉.၂၀၁၀ (ဗုဒ္ဓဟူး) နေ့ ညနေ (၄း၀၀) နာရီအချိန်တွင် မီးသင်္ဂြိုလ်မှု အခမ်းအနား အား ရေဝေးသုဿန်တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အစီအစဉ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယင်းအခမ်းအနားသို့ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးမင်းများ၊ ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကာ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)က စတီးမှန်ရွှေခေါင်းနှင့် အသင်းသူ/သားများသည် ၀ိုင်းဝန်း ကူညီဖေးမ ပေးဆပ်ခဲ့ကြပါသည်။
ယမန် နေ့ ညက နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန် အတွင်း ရှိ တော်ဝင်ကုမုဒြာ ဟိုတယ် အနီးတွင် ရှမ်းပြည်နယ် မှ မြန်မာ နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အစည်း အဝေး လာတက်သည့်ရဲမှုး တစ်ဦး ၏ အစိုးရ ကား ဆူဇူကီး အပြာရောင် နှင့် နေပြည်တော် တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် မှ ဗိုလ်မှုး နိုင်မင်း ဆိုသူစီးလာ သည့် ကိုယ်ပိုင်ကား မတ်တူး အဖြူရောင် တို့ တိုက်မိရာမှ ဗိုလ်မှုး နိုင်မင်း ဆိုသူ ကရှမ်းပြည် မှ (ကိုးကန့် ဒေသတွင် တာဝန် ကျသည် ဟု သိရသည်) ရဲမှုး အား ဆဲဆိုပြီး နောက်မူးမူးဖြင့် သူ့ တွင် ပါလာ သော ပစ္စတို သေနတ် ဖြင့် ထုတ်ပစ် သည် ဟု ဟိုတယ်ဇုန် ၀န်ထမ်း
တစ်ဦးက Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
အင်္ဂါနေ့ ည ၁၂ နာရီခန့် တွင် ဟိုတယ် ဘား တစ်ခု မှာ သူငယ်ချင်း အရာရှိ နှစ်ဦး နှင့် အတူ သောက်စားပြီး ပြန်လာသည့် ဗိုလ်မှုး နိုင်မင်း သည် ကားရပ်ထားသည့် နေရာ မှ ထွက်ရန် နောက်သို့ ဆုတ်စဉ်ရဲမှုး ကား နှင့် တိုက်မိပြီး အဆိုပါ ရဲမှုး က ဖြစ်စဉ် ကို အမှု ဖွင့်ထားရန် လို ကြောင်း ပြောသည်တွင်သူ့ တွင် အသင့် ပါလာသည့် ပစ္စတို သေနတ် နှင့် ထုတ်ပစ်ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု အမည်မဖော်လိုသည့်ဟိုတယ် ၀န်ထမ်း က သူမျက်မြင် တွေ့ ရှိ ပုံ ကို ပြောသည်။
သူက “သေနတ် သံ က နဲနဲ ကျယ်တယ် ဒါပေမယ့် ၊ဘားတွေ ပိတ်ချိန် ကားသံတွေ နဲ့ ဆူညံနဲ့ တော့ ဘာဖြစ်မှန်း မသိလိုက်ကြဘူး၊ ရဲမှုး လည်း မထိ ဘူး ၊ဘယ်သူမှ မထိ ဘူး သူ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဆွဲထား တော့ သူက အမူး လွန်နေတာ သူက ရာထူး တိုး လို့ ဒီမှာ ဒင်နာ လာလုပ်တာ ဟုပြောသည်။
နေပြည်တော် ဟိုတယ် ဇုန် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဖြစ်သူက မူ ထို ပြဿနာ ကို တွေ့ မြင်လိုက်သည့် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း များ အား မည်သူမှ ထုတ်ဖော် မပြောရ ဟု ခြိမ်းခြောက်ထားသည်။
လွန်ခဲ့သည့် စနေနေ့ က ပဲခူး အခြေစိုက် ခလရ ၅၉ မှ စစ်သားများ က သေနတ်ဖြစ် အကြောင်းမဲပစ်ခတ်သောကြောင့် လူငယ် နှစ်ဦးသေဆုံး ခဲ့ရသည်။
သတင်းရင်းမြစ်...Freedom News Group
ဘုန်းကြီးဦးဥတ္တ (ခေါ် ) ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ (ခေါ် ) ဘိက္ခုဥတ္တမ (ခေါ် ) ပေါ်ထွန်းအောင် အတ္တုပတ္တိ
*ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ*အာရှနေ၀န်း မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေ့ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ ကျရောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးသို့ အသိပေး တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ • လွတ်လပ်ရေးမျိုးစေ့ချခဲ့သူ။ • ဟေ့ကောင် ကရက်ဒေါက်(အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ခံ)မင်းထွက်သွားစမ်းပါ။ • ဒါတို့နိုင်ငံ…………?
ဘုန်းကြီးဦးဥတ္တ (ခေါ် ) ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ (ခေါ် ) ဘိက္ခုဥတ္တမ (ခေါ် ) ပေါ်ထွန်းအောင် (ဖိုင်တွဲအမှတ် - ၃ A – 1 OF 1927 )
မွေးချင်း- ၃ယောက်တွင်အကြီးဆုံးသား။ညီကျော်ထွန်းအောင်(ကိုရင်ကြီးအရှင်အရိယ)နှင့် ညီမ မအိမ်စိုးတို့ နှစ်ဦးရှိသည်။
အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ်တွင် စစ်တွေမြို့၌ ပရိယတ္တိသင်ကြားရာတွင် အကျော်တစောရှိသော ရွှေစေတီကျောင်းဆရာတော်ဘုရားထံ ဗုဒ္ဓ၏ အခြေခံစာပေများကို လေ့လာသင်ယူသည်။(၁၅) နှစ်အရွယ်တွင် ပေါ်ထွန်းအောင်နှင့် ညီငယ်ကျော်ထွန်းအောင် ရှင်သာမဏေအဖြစ် သင်္ကန်းစည်းကြသည်။ ရှင်ဥတ္တမနှင့် ရှင်အရိယဟူသော ဘွဲ့ နာမများရရှိခံယူကြသည်။ထို့နောက် အရှင်ဦးဥတ္တမရဟန်းဝတ်ဖြင့်ရန်ကုန်၊မအူပင်၊ပဲခူး၊တောင်ငူ၊မန္တလေးနှင့်ပခုက္ကူမြို့များတွင်လှည့်လည်နေထိုင်ပညာသင်ယူခဲ့သည်။ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်များကိုလည်းအပတ်တကုတ်လေ့လာကြိုးပမ်းဆည်းပူးခဲ့သည်။
တောင်ငူမြို့ တွင်ရှိစဉ် ရှင်သာမဏေစာပြန်ပွဲတစ်ခုကို ၀င်ရောက်ဖြေဆိုရာ ပထမရသည်။ တောင်ငူမြို့ မှ ရှမ်းမကြီး တစ်ဦးက သားအဖြစ်မွေးစားလိုကြောင်းပြော၍ မွေးစားလိုလျှင် ကာလကတ္တားကို ပညာသင်လွှတ်မလားဟု တောင်းဆိုရာ ထိုအမျိုးသမီးကြီး၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် လူဝတ်လဲကာ အသက်(၁၇) နှစ်အရွယ်တွင် ကာလကတ္တား၌ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ခေတ်ပညာများကို သင်ယူပြီး (၁၀)တန်း စာမေးပွဲကို အလွတ်ပညာသင်အဖြစ် ဖြေဆို အောင်မြင် ခဲ့သည်။ထိုနှစ်မှာပင် ကာလကတ္တားမှပြန်လာပြီး ရှင်ဝတ်ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေကျမ်းဂန်များကို သင်ယူသည်။
သက္ကတစသော ရှေးဟောင်းဟိန္ဒူစာပေကျမ်းများကို သင်ယူဆည်းပူးသည်။ထိုအချိန်မှာ မြန်မာပြည်တွင်လည်း နိုင်ငံရေးကိုတက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုကြသေးသော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယုဝအသင်း (Y.M.B.A=youngmen'sbuddhistsassociations) ကို တက္ကသိုလ် ပညာ တတ များဖြစ်သော ဦးဘဖေ (ဘကြီးဘဖေ) ၊ ဦးမောင်ကြီး(အမ်အေ) ၊ ဦးစိန်လှအောင်တို့က စတင်ဖွဲ့စည်းထုထောင်ပြီး အမျိုး ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် စတင်လှုပ်ရှားလာကြသည်။ အရှင်ဥတ္တမကိုယ်တော်တိုင်အိန္ဒိယမှ ပြန်ရောက်လာပြီး ၀ိုင်အမ်ဘီအေလှုပ်ရှားမှုကို တက်ကြွစွာ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။၁၉၀၇-ခုနှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီလ-၁ရက်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားသည်။ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အနောက် ဟွန်ဂွန်ဂျီ ဘုရားကျောင်းအကြီးအမှုး (Abbot of Western Hongonji Temple) မင်းသားကြီး ကိုဇင်အိုတာရီနှင့်အတူနေပြီး ကစ်စတိုမြို့ရှိ နိရှိဟွန်မွန်ဂျီ အမည်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်တွင် ပါဠိပါမောက္ခအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ထိုစဉ် ဂျပန်စာ၊ စကား ၊ အယူဝါဒ ၊ ဓလေ့ထုံးစံတို့ကို ကိုယ်တိုင်သင်ယူပြီး တစ်နှစ်အကြာစာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်သည်။ ဆရာတော်သည် မြန်မာစာပေကျမ်းဂန်တို့အပြင်ပါဠိ ၊ ဘင်္ဂါလီ ၊ နာဂရီ ၊ သက္ကဋ၊ အင်္ဂလိပ်၊ တိဘက် ၊ ဂျပန် ၊ပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုးမျိုးကို တတ်မြောက်သည်။
လက်ရှိနေရပ် - ကလကတ္တားမြို့  ၄ အေ၊ ကောလိပ်စကွဲ (College Square ) - မဟာဗောဓိအသင်း(Maha Bodhi Society)။
ပုံသဏ္ဌာန် အရပ်အမြင့် - ၅ ပေ ၄ လက်မ။
လက်ချောင်းများ - တို၍ တုတ်သည်။
နားရွက်များ - အနေတော်။
မှတ်ဆိတ်မွှေး - မရှိ။ နှုတ်ခမ်းမွှေး - မရှိ။
အမှတ်အသား - အပေါ်နှုတ်ခမ်းလက်ဝဲဘက်တွင်စောင်းစောင်း ဓါးပြတ်ရာတစ်ခုရှိသည်။ ဂုတ်တွင် မှည့်တစ်လုံး ရှိသည်။ နဖူး၏ လက်ျာဘက်၌ အမာရွတ်တစ်ခုရှိသည်။
ထူးခြားချက်များ -မတ်မတ်လမ်းလျှေက်သည်။စကားကို ကျယ်ကျယ်နှင့်မြန်မြန် ရခိုင်သံဝဲ၍ပြောသည်။ အိန္ဒိယ အမျိုးသားတစ်ဦးကဲ့သို့ ပြုံး ရွှင်သော အမူအရာရှိသည်။ စကားပြောရာ၌ ပွဲကျအောင်ပြောသည်။
မြင်လျှင်မှတ်မိသောအရာရှိများ မြန်မာနိုင်ငံ မှုခင်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဌာန ( C. I .D Burma) ရှိထောက် လှမ်းရေးဌာနမှ မြန်မာအရာရှိအားလုံး။
“၂၂ နှစ် ကြာခဲ့ပြီးမှ”ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဗဟုသုတကို ဗမာ့နိုင်ငံရေးလောကသို့ သယ်ယူဆောင်ကြဉ်းလာ၍ ဗမာပြည်သူပြည်သားများအား နိုင်ငံရေးအသိဉာဏ်မျက်စိကို ပထမဆုံး ဖွင့်ပေးခဲ့သည့်
အင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏ စစ်တပ်၊ ပုလိပ်တပ်၊ ရုံး၊ ထောင်၊ ဂါတ်အမျိုးမျိုးနှင့် ဥပဒေဆိုးကို ရောစွက်ကာအဘက်ဘက်မှ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကိုခံနေရချိန်တွင်ဗမာပြည်သူပြည်သားရဟန်းရှင်လူများအားနယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးသဘောတရား
နှင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းကို ပထမဆုံး ပေါင်းစပ်ပေးခဲ့သည့် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ……နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲတွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေးအရ ပထမဆုံး ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းခံရ၍ ဗမာတစ်မျိုးသားလုံးအား ရှေ့ဆောင်လမ်းပြခဲ့သည့်ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ…….ဆရာတော်၏ဘွဲ့အမည်နာမသည် ဆရာတော်ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည့် ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှစ၍ ရေတွက်သော် နှစ်ပေါင်း ၂၂ နှစ် ကြာခဲ့ပြီး လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှစ၍ ရေတွက်သော် နှစ်ပေါင်း ၁၂ နှစ်တိုင်တိုင် ရှိခဲ့ပြီးမှ “ဦးဥတ္တမ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့”၏ ၆-နှစ်တိုင်တိုင် ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် လွန်ခဲ့သော ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၇ ရက် (ဆရာတော်၏ ၈၂ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ဖြစ်သော ပြာသိုလဆန်း ၁၂ ရက်) နေ့က ရန်ကုန်မြို့တော်မှ ပန်းခြံတစ်ခုအား “ဦးဥတ္တမပန်းခြံ”ဟူ၍ အမည်တပ်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရ လေသည်။
မည်သို့င်ဖြစ်စေ ယင်းအမည်တပ် သတ်မှတ်မှုသည် တစ်စုံတစ်ခုသောတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့် ထူးခြားသည် ဆိုင်နိုင်လေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့သမားများ ဗမာပြည်ကို ၀င်ရောက် သိမ်းပိုက်ပြီး အင်္ဂလိပ်စစ်တပ် အလုံးအရင်းနှင့် တပ်စခန်းချရာစစ်နယ်မြေကို အကြောင်းပြု၍ အမည်ပေးခဲ့သော ရွှေတိဂုဏ်စေတီတော်ခြေရင်းမှ“ကန်တော်မင်ပန်းခြံ”ကိုယင်းအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့စစ်တပ်များ၏အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်
ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုများအကြားမှ မတုန်မလှုပ် နောက်မဆုတ်ဘဲ ရဲရဲတောက်ရင်ဆိုင်ခဲ့သောဆရာတော်ဦးဥတ္တမ၏ ဘွဲ့အမည်ကို ပြောင်းလဲကာ “ဦးဥတ္တမပန်းခြံ”ဟူ၍ သတ်မှတ်လိုက်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်ပေသည်။
့ကိုယ်တပိုင်း) ကို တွေ့မြင်ကြရသည်။ ယင်းနံရံပန်းချီနှင့် ဆရာတော်၏ ရုပ်တုပုံတော်များမှာ ယာယီဆင်ယင်ပြသထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တကယ်တန်း ထုလုပ်ပြီးစီးသည့်အခါတွင် လေးကိုင်းသဏ္ဍာန် နံရံကြီးမှာ အလျား ၆၅-ပေ အမြင့်၁၂ပေရှိမည်ဖြစ်၍နံရံကြီးရော နံရံမှ ကိုယ်လုံးကြွရုပ်ပုံများပါ အင်္ဂတေဖြင့် တွေ့မြင်ကြရမည် ဖြစ်သည်။ ဦးဥတ္တမ ပုံတော်မှာလည်း အလုံးစုံပြီးစီးသည့်အခါတွင် အမြင့် ၉-ပေရှိ မတ်တတ်ရပ် ကြေးရုပ်ပုံတော်ကြီးအဖြစ် သွန်းထုပြုလုပ်ထားရှိမည်ဟု သိရသည်။အဆိုပါ နံရံပန်းချီရုပ်တုများနှင့်အထူးသဖြင့် ဦးဥတ္တမဆရာတော်၏ ကြေးရုပ်ပုံတော်ကို ပန်းပုဆရာကြီး ဦးဟန်တင်က သွန်းလောင်းထုလုပ်ရန် စီစဉ်ရာထားသည်။
ပန်းခြံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားနေ့က မြင်တွေ့လိုက်ရသော ဆရာတော်၏ ကိုယ်တပိုင်းရုပ်ထုမှာ ဆရာဦးဟန်တင်၏ အနုပညာလက်ရာ မြောက်မှုကို အပြည့်အ၀ ဖော်ပြနေသည်ဟုပင် ဆိုနိုင်သည်။ဦးဟန်တင်သည် ဆရာတေ်၏ ပုံကို လွန်ခဲ့သော ၂-နှစ်ခန့်ကပင် ထုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ သို့ထုလုပ်စဉ်က ယင်းပုံတူရုပ်တုကို မည်သူကမှ ခိုင်းစေခြင်းမပြုခဲ့သည်မဟုတ်၊ ပန်းပုဆရာပီသသည့် ဦးဟန်တင်၏ အနုပညာဗီဇကြောင့် တိုင်းပြည်တွင် ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များ၏ ရုပ်တုပုံတူများကို အချိန်ရတိုင်း အလဟဿမဖြစ်စေဘဲ ထုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤတွင် ၁၉၅၄ ခုနှစ်ကပင် စတင်၍ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့သောဦးဥတ္တမအထိမ်းအမှတ်ကော်မတီသည်ဆရာတော်ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ကြေးရုပ်ပြုလုပ်ထားရှိရန်နှင့် ဦးဥတ္တမလမ်း ဦးဥတ္တမပန်းခြံ၊ ဦးဥတ္တမ စာသင်ကျောင်း စသည်တို့ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတို့နှင့် တဘက်မှ အရေးဆိုနေလေရာ ဦးဟန်တင်သည် ယင်းကော်မတီနှင့် တွေ့ဆုံကာ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမပုံတူရုပ်တုကို ပြသခဲ့သည်။
ကော်မတီကလည်း ပို၍ တိကျသေချာစေရန် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ နှစ်မ ဒေါ်အိမ်စိုးကို ခေါ်၍ ရုပ်တုကို ပြသခဲ့ရာ ဒေါ်အိမ်စိုးသည် ဦးဟန်တင်၏ လက်ရာဖြစ်သော ဆရာတော်၏ကိုယ်တပိုင်းရုပ်တုကို ကြည့်ကာ မျက်ရည်ကျခဲ့ရရှာသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဦးဥတ္တမ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ၏ တာဝန်ပေးချက်အရ ဆရာတော်၏ ကြေးရုပ်ပုံတူ (တကိုယ်လုံး) ထုလုပ်ပြီးစီးသည့်အခါတွင် ဆရာဦးဟန်တင်၏ လက်ရာပြောင်မြောက်မှုဖြင့် ဆရာတော်၏ ကြေးရုပ်မှာ ယခုထက် ပိုမိုသက်ဝင် လှုပ်ရှားလာလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
ကိုမြင်ကြရ၏။ ဆရာတော်ကား ယခုမြန်မာ နိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံတော်သားတို့ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် အပိုင်ရ၍ ခံစားစံစားနေရသော အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်လွတ်လပ်ရေး ဗိမာန်ကြီးကို အစဦးစွာ ပန္နက်ချခဲ့သောအာဇာနည် မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေ တည်း။
ခေါင်ဇာနည်ဝင်၊ ပြောင်မာတင်သည့်၊ မြရှင်သကျ၊ သမ္ဗုဒ္ဓ၏၊ ပုတ္တရင်းစစ်၊ ဖြစ်ကြီးဖြစ်၍၊ မဟစ္ဆရီ၊ အံ့လောက်ဘိသား၊ တြိသာသနာ၊ စက်ရောင်ဝါနှင့်၊ မြန်မာမျိုးညွန့်၊ ညှိုးမတွန့်အောင်၊ သက်စွန့်လျက်ပင်၊ ရွှေလမ်းထွင်သား၊ အရှင်ဥတ္တမ၊ ထေရိန္ဒလျှင်၊၀ံသပါလိတ်၊ ရဲတိဟိတ်သို့၊ စိတ်စေတနာ၊ စူးစိုက်စွာလျှင်၊ မဟာဝရဇိန်၊ မိုးကြိုးရှိန်သို့၊ ပစ်ချိန်ကျင်းကျင်း၊ ရန်မာန်ခွင်းသည်၊ ဘက်ကင်းတေဇော်ရှိန်ဘုရား။သူ့ကျွန်မခံ အမျိုးသားဇာတိမာန် ထက်သန်စွာဖြင့် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ဦးစွာပထမ မြန်မာပြည်သူများကို စတင်တပ်လှန့် နှိုးဆော်စည်းရုံးခဲ့သူမှာ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမပင်ဖြစ်ပေသည်။ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသည် ဒေးဒရဲမြို့အပိုင် ဆူးကလပ်ရွာတွင် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး တရားဟောပြောမှုဖြင့် မအူပင်ထောင်တွင် ၁၂ လမျှ အကျဉ်းချခံခဲ့ရသည်။၁၉၂၂ ခု ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် မအူပင်ထောင်မှ လွတ်မြောက်သည်။ ထိုသို့ ဆရာတော် ထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသည့်အခါ ၁၉၂၂ ခု ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရဟန်းရှင်လူများက ရန်ကုန်မြို့ ဂျူဗလီဟောတွင် တခဲနက် ဂုဏ်ပြုပူဇော်ကြသည်။
ယင်းပူဇော်ပွဲတွင် လယ်တီပဏ္ဍိတဆရာ ဦးမောင်ကြီးက အထက်ဖော်ပြပါ ဘဒ္ဒန္တဥတ္တမအရှင်သူမြတ် ဘုန်းတော်ဘွဲ့မင်္ဂလာရတုဖြင့် ရေးသားပူဇော်ဂုဏ်ပြုခဲ့လေ ည်။ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသည် ဤသို့ ချီးကျူးပူဇော်ခံထိုက်အောင်ပင် ကျွန်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ရေး၊ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး တို့တွင် အမျိုးသားများ တက်ကြွလာစေရန် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ၏ ဘ၀နိဒါန်းပိုင်းသည် တနိုင်ငံလုံး အုတ်အုတ် ကျက်ကျက် တခဲနက်ဖြစ်အောင်အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့ သော်လည်း ဆရာတော်၏ ဘ၀နိဂုံးမှာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ် ကောင်းလှသည်။
တော် ဦးဥတ္တမသည် ၁၉၁၁ ခုနှစ်မှ အစပြု၍ ကလောင်ကိုကိုင်၍ တရားဟော စင်မြင့်ပေါ်တက်၍ မြို့ပြမှသည် ကျေးစွန်ရွာဖျားအထိ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ သူပြောသမျှ စကား၊ သူဟောသမျှ ရဲရဲတောက် တရားများသည် လွတ်လပ်ရေး မွတ်သိပ်နေသူပြည်သူများအဖို့ အားဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒူးထောက်ခေါင်းငုံ့နေကြရရာမှ ရင်ကော့ခေါင်းမော့လာနိုင်ကြသည်။
“ဆာဂျီနယ် ကရက်ဒေါက်………သင် ဗမာပြည်က ထွက်သွားလိုက်ပါ”ဆရာတော်က အုပ်စိုးသူ အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ခံထံ စာဖြင့် ကန့်ကွက်ရေးသားပေးပို့ လိုက်သည့်အခါ အမျိုးချစ်သူများက ကြက်သီးမွေးညှင်းထမျှ အားရကျေနပ်ခဲ့ကြသည်။ ဆရာတော်အား ဆူကလပ်ရွာတွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်ဟောပြောမှုဖြင့် မအူပင်တွင် ထောင်ဒဏ် အပစ်ပေးလိုက်သည့်အခါ ပုသိမ်မှစ၍ တနိုင်ငံလုံး သံဃသမဂ္ဂီ အသင်းများ၊ ကုမ္မာရီအသင်းများမှာ အုံကြွမှုပေါ်ပေါက်လာ၍ တနိုင်ငံလုံး စည်းလုံးမိသွားကြသည်။ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသည်ပြည်သူများ၏လေးစားကြည်ညို၍ပြည်သူများနှင့်တသွေးတည်းတသားတည်းဖြစ်သည်။
အစိုးရ အကြည်ညိုပျက်အောင် ဟောပြောမှုဖြင့်၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်မြို့တွင် ထောင်ဒဏ် ၃နှစ်ရုံးတင်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည့်အခါဖိုက်စကွဲယား(ပန်းခြံဗန္ဓုလပန်းခြံ)တွင်သွေးမြေကျလူထုဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယင်းမှအစပြု၍ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်များလွှမ်းမိုးပြန့်ပွားသွားကြပြန်သည်။ဆရာတော်၏ ဘ၀ နိဒါန်းပိုင်းသည် လွတ်လပ်ရေး၊ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင်။ဆရာတော်၏ ဘ၀နိဂုံးပိုင်းက ထိုသို့မဟုတ်ပြီ။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရက အိမ်ကြက်ခြင်း အိုးမည်သုတ်ခွပ်စေသော ၉၁ ဌာန အုပ်ချုပ်ရေးကို ပေးအပ်လိုက်သဖြင့် မြန်မာပြည်ကို အိန္ဒိယပြည်က ခွဲထွက်ပြီးလျှင် ၁၉၃၆ ခု၊ နိုဝင်ဘာလတွင် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်စီစဉ်သည်။သည်တွင်နိုင်ငံရေးပါတီများအဖို့အနိုင်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းရာ၌ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ
ထိုအချိန်ကဆရာတော်မှာ ဆီးချိုရောဂါနှင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာ ၍စိတ်ပန်း ကိုယ်နွမ်းဖြစ်နေသဖြင့်လည်းကောင်း၊နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များစည်းရုံးမှုမရှိဘဲရာထူးအာဏာရရှိရေးသာကြိုးပမ်း
နေကြသဖြင့်လည်း ကောင်း နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်မှု ရပ်ဆိုင်း၍ အိန္ဒိယနှင့် ဗမာပြည် အလျဉ်းသင့်သလို နေထိုင်လျက် ရှိနေသည်။ ထိုစဉ် ငါးဖွင့်ဆိုင်အဖွဲ့မှ ဆရာတော်အား လှည့်ဖျားစည်းရုံး၍ အိန္ဒိယမှ ရန်ကုန်သို့ ပင့်ဆောင်လာကြသည်။ နိုင်ငံရေးစိတ်မကုန်သောဆရာတော်မှာငါးပွင့်ဆိုင်အတွက်မဲဆွယ်ပေးရန်ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြန်သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီအချို့မှမျိုးချစ်လူငယ်အချို့ကဆရာတော်ထံသွားရောက်၍မေတ္တာရပ်ခံသော်လည်းအရှိန်အ၀ါ ကောင်းသော ငါးပွင့်ဆိုင်များ၏ စကားနားဝင်သဖြင့် မည်သို့မျှ မတတ်နိုင်ကြတော့ချေ။ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် ငါးပွင့်ဆိုင်အတွက် အနယ်နယ်တရားဟောရာတွင်လေယာဉ်ပျံနှင့်ပင်ခမ်းခမ်းနားနား ကြွရောက်ဟောပြောရသည်။
ဆရာတော်ကို မမြင်မတွေ့ရသည်မှာ ကာလအတန်ကြာပြီဖြစ်သဖြင့် ဆရာတော်၏ ငါးပွင့်ဆိုင်တရားပွဲမှာ ပရိသတ်တိုးမပေါက်အောင် စည်းကားသည်။ ၉၁ ဌာန ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဦးဘဖေခေါင်းဆောင်သောငါးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့၊ဒေါက်တာဘမော်အဖွဲ့၊ဦးချစ်လှိုင်အဖွဲ့၊ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းတိှုှ့ဗမာ
သခင်အဖွဲ့၊ ဖေဘီယန်အဖွဲ့တို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ဆရာတော်၏ အရှိန်အ၀ါဖြင့် အခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့များထက် ငါးပွင့်ဆိုင်က အပြတ်အသတ် အမတ် ၄၆ နေရာဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
သို့သော်လည်းဝန်ကြီးရာထူးအဝေမတည့်သောကြောင့်ငါးပွင့်ဆိုင်ခေါင်းဆောင်ဦးဘဖေမှာအစိုးရမဖွဲ့နိုင်တော့ ချေ။ အမတ် ၁၆ နေရာသာ ရရှိသည်။ ဒေါက်တာ ဘမော်ကညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့၍ နန်းရင်းဝန်ရာထူး ရယူသွားလေသည်။သည်တွင် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမအဖို့ နိုင်ငံရေးသံဝေဂရစရာ ကြုံရလေတော့သည်။ နိုင်ငံရေးသမားအချို့မှာ ဆရာတော်၏ အရှိန်အ၀ါဖြင့် ၀န်ကြီး၊ အတွင်းဝန်နှင့် မင်းတိုင်ပင်အမတ်စသည်တို့ ဖြစ်ကုန်ကြသော်လည်း ဆရာတော်ဦးဥတ္တမမှာ ဆီးချိုရောဂါသည်ဘ၀ဖြင့် ပြုစုသူ ကင်းကာ ရပ်တည်ရာမရ စိတ်ထင်ရာ ရန်ကုန် လမ်းမများပေါ်တွင် လျှောက်သွားလျက်ရှိသည်။
ဆရာတော်သည် ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြတ်နေသော သင်္ကန်းကြီးကို ပိုသီပတ်ပီ ၀တ်ရုံ၍ လွယ်အိတ်ကြီး တလုံးလွယ်ကာ ထီဖိနပ်မပါ သတင်းစာတိုက်များသို့ လျှောက်သွားပြီး အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ သတင်းစာများကို တောင်ယူလေ့ရှိသည်။ ရရှိသော သတင်းစာများကို လမ်းဘေးတိုက်ရိပ်၊ သစ်ပင်ရိပ်များအောက်တွင် ထိုင်ဖတ်လေ့ရှိသည်။ အသက်အရွယ်ကြီး၍ အိုမင်းနေသည့်အပြင် ဆီးချိုရောဂါ၊ ခြေထောက်အနာကြောင့် ပိန်ချုံးကာ ခပ်ယဲ့ယဲ့မျှပင် သွားလာနေရသည်။ လမ်းတွင် သတိမေ့လဲပြိုနေသည့်အခါ ဆရာတော်ကို ကြည်ညိုလေးစားသူများက သူတည်းခိုရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးကြသည်။ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဝေဒနာနှစ်ရပ်စလုံးခံစားနေရလေသည်။
ဆရာတော်အားပြုစုသူကင်း၍ ဤမျှအခြေအနေဆိုးလာသည့်အခါ ၁၉၃၉ ခု သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ရခိုင်ရဟန်းတော်များ သမဂ္ဂအသင်း၏ ၄ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမအား စောင့်ရှောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ငါးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့ကိုလည်း အပြစ်တင်ဝေဖန်ကြလေသည်။ ရခိုင်ရဟန်းတော်များသမဂ္ဂမှ ရဟန်းတော်များသည် ဆရာတော်နေထိုင်ရာ အာစရိယသမဂ္ဂအသင်းတိုက်သို့ သွားရောက် တွေ့ဆုံသည့်အခါ သွားရောက်တွေ့ဆုံသူများကိုအတွေ့မခံငြင်းဆန်လျက်သတိမကောင်းတော့ဘဲ လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေလေပြီ။သည်တွင် သူရိယတိုက်အုပ် ဦးဘကလေး၏ အကူအညီဖြင့် ရခိုင်သံဃာတော်များက ဆရာတော်ဦးဥတ္တမအား ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့ကုသခဲ့ကြသည်။ အထူးခန်းမရှိသေးသဖြင့်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအခန်းနံပါတ်၈ခုတင်နံပါတ်၁၇ကုသိုလ်ဖြစ်အခန်းတွင်တင်ပို့ကုသကြ
သည်။သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် သူရိယဦးဘကလေး၊ မြို့တော်ဝန် ဦးဘ၀င်း၊ ကပ္ပတိန် ဘဖူးတို့ ဆေးရုံသို့ သွားရောက်၍ ဆရာတော်အား အားပေးစကား ပြောကြားရာ ဆရာတော်မှာ စကားပီသအောင် ပြောနိုင်၍ သတိလစ်ခြင်း မရှိတော့ပေ။ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဦးဘကလေး အကူအညီဖြင့်ပင် ကုသိုလ်ခန်းမှ အထူးခန်း ၁၃ ခုတင် နံပါတ် ၁၁ သို့ ပြောင်းရွှေ့ကုသသည်။ ဆရာဝန်ကြီးများက အထူးဂရုစိုက် ကုသကြသည့်အတွက် ဆရာတော်၏ ဝေဒနာမှာ သက်သာစ ပြုလာသည်။ သို့သော် မအူပင် ထောင်ကျစဉ်အခါကပင် နှစ်ရှည်လများ စွဲကပ်လာသော ခြေထောက်ကင်ဆာရောဂါမှာ ရိုးရိုးကုသ၍ မဖြစ်နိုင်တော့၊ ခြေထောက်ဖြစ်ကုမှသာ အသက်ရှင်နိုင်တော့မည်။ဆရာဝန်ကြီးများက ဦးဘကလေးအား အကြံပေးသဖြင့် ဆရာတော်အား လျှောက်ထားရာဆေးရုံပေါ်မှ ဇွတ်ဆင်း၍ ၄၆ လမ်း ကုလားအသင်းတိုက်ပေါ်တွင် သွားရောက်သီတင်းသုံးနေလေသည်။ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ဆရာတော်သည် ပြန်လည်နာလန်မထူနိုင်တော့ဘဲ ၁၉၃၉-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၉)ရက်တွင် ပျံလွန်တော်မူသည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ရဲ့ အမှတ်တရကို ကျမ သတိတရနဲ့ တင်ပြ ခဲ့တာပါ။သူရဲ့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့သမိုင်း တလျှောက်ကို သေချာအသေးစိတ်ဖတ်ရှုချင်ရင်တော့(http://ottama.multiply.com) အဲဒီနေရာလေးတွင် အသေးစိတ်လေ့လာနိူင်ပါသည်။ကျမ ကိုယ်တိုင်လဲ ဖတ်ရှုပြီးပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါသည်။
အချက်ပေါင်းမြောက်များစွာမင်းမဲ့စရိုက်အသွင် စစ်အာဏာရှင်တွေရက်ရက်စက်စက်ပစ်သတ်လိုက်တဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်(၂)ဦးရဲ့ ဈာပန ရုပ်သံမြင်ကွင်း
အပြစ်မဲ့ ကျောင်းသားလူငယ် (၂) ဦး ၏ နောက်ဆုံး ဈာပနမှတ်တမ်းအား မြန်မာ ပြည်သူများအတွက် သမိုင်းဝင် မှတ်တမ်း တစ်ခုအဖြစ် ပြန်လည် စုစည်း ဖော်ပြပေးသော BURMA TODAY အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, September 08, 2010 Links to this post
စစ်အာဏာရှင် လူသတ်သမားဦးသန်းရွှေ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီး ထွက်ခွာရုပ်သံမှတ်တမ်း
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ သည် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ ဟူကျင်တောင်း ၏ ဖိတ်ကြားချက် အရ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးလည်ပတ်ရန် ယနေ့နံနက် (၁၀) နာရီ (၁၅) မိနစ်က အထူး လေယာဉ်ဖြင့် နေပြည်တော် လေဆိပ်မှ ထွက်ခွားသွား ခဲ့သည် ။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ခေါင်းဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး၊
နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်၊
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဥာဏ်ထွန်း၊
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ဟိန်း၊
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ မှ ပို့ဆောင် ကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ နှင့် အတူ
နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင် ဦးသူရရွှေမန်း၊
အတွင်းရေးမှူး (၁) သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး၊
ဦးစိုးသာ ၊ ဦးတင်နိုင်သိန်း ၊ ဦးသောင်း ၊ ဦးဥာဏ်ဝင်း ၊ ဦးသိန်းညွန့် ၊ ဦးသိန်းဆွေ ၊ ဦးသိန်းဇော် ၊ ဦးလွန်းသီ ၊ ဒေါက်တာ ကျော်မြင့် ၊ ဗိုလ်ချုပ် သန်းအောင် ၊ ဒေါက်တာ ပိုင်စိုး တို့ လိုက်ပါ သွားကြသည်။
စစ်တပ်က ပစ်ခတ်၍ သေဆုံးခဲ့ရသော ပဲခူးမြို့မှ လူငယ် ၂ ဦး၏ ဈာပနကို ယနေ့ ကျင်းပရာ အာဏာပိုင်များက မိသားစုဝင်များကို သေဆုံးခဲ့ရသူများ၏ ရုပ်အလောင်းများအား ကြည့်ရှုခွင့်မပြု ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ညီလေးရဲ့ နောက်ဆုံး ရုပ်ကလာပ် ကိုတောင် မြင်ခွင့်မရှိပါဘူးဗျာ။ ရေခဲတိုက်က ထုတ်တော့လည်း အရပ်ဝတ် လုံခြုံရေးတွေ ဦးစီးပြီး ကြက်ခြေနီတွေက ထုတ်တယ်။ ကျနော်တို့က အပြင်က စောင့်နေရတယ်။ သုသာန် မှာလည်း အခေါင်းနားကို မိသားစု ကပ်ခွင့် မပေးဘူး။ သရဏဂုံ တင်ပြီးတာနဲ့ သူတို့ဟာ သူတို့ မီးရှို့စက်ထဲ ထည့်ပစ် လိုက်ကြတာ” ဟု သေဆုံးသူ မောင်စိုးပိုင်ဇော်၏ မိသားစုဝင် တဦးက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သော စနေနေ့ညက ပဲခူးမြို့ ဇိုင်းဂနိုင်း တောင်ပိုင်းရပ်ကွက် မြလမ်းရှိ ကယ်လီဖိုးနီးယား စားသောက်ဆိုင်မှ ထွက်လာသော ခလရ ၅၉ မှ စစ်တပ်အရာရှိ စီးနင်းလာသည့် ဆိုင်ကယ်နှင့် အရပ်သားများ စီးနင်းလာသည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ် တိုက်မိရာမှ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီးနောက် စစ်အရာရှိက တပ်သားများကို ပြန်ခေါ်ကာ အရပ်သားများကို ပစ်ခတ်စေခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မောင်အောင်သူဟိန်း (၂၃ နှစ်) က သေနတ်ဒဏ်ရာ ၆ ချက်၊ မောင်စိုးပိုင်ဇော် (၁၉ နှစ်) က သေနတ်ဒဏ်ရာ ၄ ချက် အသီးသီး ရရှိပြီး နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့သည်။
“ပစ်မိန့်ပေးတာက ဗိုလ်ချုပ်တဦးရဲ့ သား ဗိုလ်ကြီးသိဒ္ဓိစိုးလို့ ကြားတယ်။ ပစ်တဲ့သူက ကလေးစစ်သားအဖြစ် စုဆောင်းခံထားရတဲ့ တပ်သား အဆင့်ရှိ မောင်ထွန်းပါ။ မောင်ထွန်းကတော့ သူပစ်တယ်လို့ ၀န်ခံတယ်လို့ ကြားတယ်” ဟု ခလရ ၅၉ တပ်နှင့် နီးစပ်သူ တဦးက ပြောသည်။
ပဲခူးမြို့အတွင်း အရပ်သားများအား ပစ်ခတ်ခဲ့မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ်တပ်က ပစ်ခတ်မှုတွင် ပါဝင်သူများအား အရေးယူမှုရှိ မရှိ သတင်းမထုတ်ပြန် သော်လည်း စစ်အစိုးရ ထိန်းချုပ်သည့် ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာနများကမူ အရပ်သားများက သေနတ်ဝင်လုသဖြင့် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရသည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
“ဒီကိစ္စအပေါ်မှာ ပစ်မိန့်ပေးသူနဲ့ ပစ်သူတွေကို ဘယ်လိုအရေးယူနေပါတယ် ဆိုတာမျိုးတော့ မထုတ်ပြန်ဘဲ၊ ကလေးတွေက သေနတ်ဝင်လုပါတယ်လို့ FM တွေမှာ ပြောနေတယ်ဗျာ။ တကယ်တမ်းက ဇိုင်းဂနိုင်း မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တာကို တောင်ပိုင်းအထိ လာပစ်သွားတာ။ သေနတ်လုလို့ ပစ်တယ်ဆိုရင် မြောက်ပိုင်းမှာတင် အပစ်ခံရမှာပေါ့” ဟု ဇိုင်းဂနိုင်း ရပ်ကွက်သားတဦးက ပြောသည်။
ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရသူများ၏ ရုပ်အလောင်းများကို ရယက အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စစ်တပ်တို့ ပူးပေါင်းကာ ညတွင်းချင်း ဖျောက်ဖျက်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရကြောင်း၊ ရင်ခွဲရုံတွင် ထားရှိသည်ဟု တာဝန်ရှိသူများက ပြောဆိုသော်လည်း အခေါင်းကိုသာ မြင်ခွင့်ရခဲ့ကြောင်း သေဆုံးသူ၏ မိသားစုဝင်များက ပြောသည်။
ပဲခူးဆေးရုံကြီးအတွင်းရှိ ရင်ခွဲရုံမှ ဆင်ဖြူကွင်း သုသာန်သို့ သွားရာလမ်းတလျှောက်တွင်လည်း လုံခြုံရေးရဲများ၊ အရပ်ဝတ် ထောက်လှမ်းရေးများက စောင့်ကြပ်နေကြောင်း လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ သူများထံမှ သိရသည်။
“မနက်ခင်းကတည်းက ဆေးရုံကြီးရှေ့က လမ်းကို ပိတ်ထားတယ်။ လမ်းတလျှောက်မှာလည်း ရဲတွေ ချထားတယ်။ နောက်ပြီး “ဆူပူမှုဖြစ်ရင် ပစ် ဆိုပြီး ရဲတွေကို အမိန့်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်နေတာဆိုတော့ တချို့ကလည်း လိုက်မပို့ရဲကြတော့ဘူး။ မြို့ခံတွေကတော့ မကျေနပ်ကြဘူးပေါ့။ ဟိုတလောကလည်း ရဲက အရပ်သားကို ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်တယ်၊ အခုလည်း စစ်တပ်က မြို့ထဲအထိ ၀င်ပြီး ပြည်သူကို ပစ်သတ်သွားတာကိုး။ ဒါ စစ်ရာဇ၀တ်မှုပဲပေါ့ဗျာ” ဟု နာရေးပို့ဆောင်ခဲ့သူ တဦးက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်လေ့ရှိကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက ထောက်ပြလေ့ရှိကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး မစ္စတာ ကင်တားနားကလည်း လွန်ခဲ့သည့် မတ်လအတွင်းက မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သော ရာဇ၀တ်မှုနှင့် စစ်ရာဇ၀တ် မှုများကို ကုလသမဂ္ဂက ကော်မရှင်ဖွဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန် အကြံပြု တောင်းဆိုထားသည်။
အဆိုပါအကြံပြုချက်ကို အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ချက် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ သြစတြေးလျ ၊ စလိုဗက်ကီးယားနှင့် ကနေဒါနိုင်ငံတို့က ထောက်ခံထားပြီးဖြစ်သည်။
’’အခုချိန်မှာတော့ အားလုံးက ဝိုင်းပြီးတော့ အားပေးနေတယ်။ အားလုံးကလည်း ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အမျိုးသားရေး အသွင်ဆောင်စွာ ရပ်တည်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် မိသားစုတွေက အားတက်နေတာ ရှိတယ်။ မိသားစုအတွင်းက ညီအကို မောင်နှတွေကတော့ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ငိုနေတာတွေ ရှိတယ်.။
ဒီနေ့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာအသံကပြည်သူတွေကို လိမ်လည်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်း
ဒီနေ့နအဖမြန်မာ့အသံက စစ်သားတွေက စပြီး သေနတ်နဲ့ပေါ်တင် စ ပစ်တာကို ကျောင်းသားတွေက သေနတ်ဝင်လုလို့ပစ်ရတာပါဆိုပြီး လိမ်ညာပြောတယ်။ ပဲခူး အခြေစိုက် ခလရ ၅၉ က ဗိုလ်ကြီး သိဒ္ဓိစိုး က ပစ်မိန့် ပေးလို့ဝိုင်းပြီး သွေးဆာဆာနဲ့ပစ်တာကို ဖုံးကွယ်ထားတယ်။
ထို့ အတူ အာဏာရူးများရဲ့လက်ပါးစေများဟာ အင်တာနက်စာမျက်နှာများ အီးမေးလ်အုပ်စုများ ဖိုရမ်စကားဝိုင်းများအတွင်းမှာ သေနတ်နဲ့ မတရားပစ်သတ်ခံခဲ့ရလို့သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသား မောင်အောင်သူဟိန်းနဲ့မောင်စိုးပိုင်ဇော်တို့ ဟာ ရပ်ကွက်အတွင်းမှာ ဆိုးသွမ်းသောင်းကျန်းနေသူတွေ ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့် စစ်သားတွေက ပစ်ခတ်ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတာဆိုပြီး သတင်းမှားတွေ လိမ်ညာမှုတွေ အဖြစ်အပျက်ကို မသိသူတွေ အမှန်အတိုင်း မသိရလေအောင် လိမ်ညာဖန်တီးပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဒါတွေဟာ နအဖနဲ့လက်ပါးစေတွေ အခု ပဲခူးကိစ္စမှာ သူတို့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီး မှားတာကို ပြည်သူတွေ အုံကြွပေါက်ကွဲမှာကို အကြောက်ကြီးကြောက်ပြီး သတင်းမှန်ကို ပြန်လှည့်ဖြားဖုံးကွယ်ဖို့လုပ်ဆောင်တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာရူးတွေဟာ ယခင်တုန်းကလည်း ပြည်သူတွေ ကျောင်းသားတွေကို သတ်ဖြတ်တာမှန်သမျှ ဘယ်တော့မှ အမှန်ထုတ်ဖေါ်ပြောလေ့ပြောထ မရှိဘဲ၊ အဖြစ်အပျက်မှန်တွေကို ဖုံးကွယ်ပြီး လိမ်ညာသတင်းထုတ်တာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၈၈ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးတုန်းကလည်း စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော် သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့သေဆုံးရတာကို ဓါးဒဏ်ရာနဲ့သေရတာဆိုပြီး မြန်မာအသံတွေ သတင်းစာတွေကနေ ဗြောင်ကျကျ လိမ်ညာပြောဆိုခဲ့တယ်။
ဒီလိုဘဲ အာဏာရူးတွေနဲ့လက်ပါးစေတွေ ၀ိုင်းနှိပ်စက် ရိုက်ပုတ်သတ်ဖြတ်လို့ထောင်အတွင်းမှာရော အများသူငှာ မြင်ကွင်းမှာရော သေဆုံးသွားကြရတဲ့ ပြည်သူတွေ ကျောင်းသားတွေ ရှိခဲ့ရာမှာလည်း အာဏာရူးတွေဟာ ဖြစ်ရပ်အမှန်ကို မသိကျိုးကျင်ပြုကြတယ် သတင်းအမှားတွေ လိမ်ညာထုတ်ပြန်ကြတယ်။
တကယ်တော့ အာဏာရူးတွေနဲ့လက်ပါးစေတွေဟာ သွေးဆာနေတဲ့ မိစ္ဆာကောင် လူသတ်သမားတွေဘဲ။
အခု ပဲခူးမြို့မှာ ဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်ဟာ အာဏာရူးတွေ လက်ပါးစေ စစ်သားတွေရဲ့အုပ်စုလိုက် လက်နက်နဲ့ပေါ်တင်စော်ကားသတ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကို သိသိသာသာကြီး သိလျက်နဲ့ဘာမှ မတုန့် ပြန်ဖူးဆိုရင် ဒီမိစ္ဆာကောင်တွေ သေနတ်ပြောင်းဝမှာ ကိုယ်ရဲ့ခေါင်းခန္ဓာကိုယ်ကို အသာတကြည် ငုံ့ ခံပေးလိုက်ဖို့ ဘဲ ရှိတော့တယ်။ အာဏာရူးတွေ ကြောက်တာ လက်နက် လက်နက်ချင်းဆိုရင် မလုပ်ရဲဖူး၊ ပြည်သူတွေ တစ်စုတစ်လုံးနဲ့ရရာပစ္စည်း လက်နက်လုပ်ပြီး ပြန်တုန့် ပြန်ကြည့်ပါလား အာဏာရူးတွေ အာဏာရူးလက်ပါးစေတွေ သွေးကြောင်ကြတယ်ဆိုတာ ယခင် လူထုအုံကြွမှုအတွင်းက ပြည်သူတွေက ပြန်တုန့် ပြန်မှုတွေလုပ်တုန်းက သက်သေပြနေတယ်။ လက်နက်မဲ့ ပြည်သူကို စိမ်ပြေနပြေ ပစ်ခတ်လို့ရနေလို့ သာ၊ ပြည်သူတစ်ဦးစ နှစ်ဦးစနဲ့ မို့ သာ အုပ်စုလိုက် ၀ိုင်းအနိုင်ကျင့်ရဲကြတာ လက်ထဲ သေနတ်ရှိနေလို့ သာ လက်ယားပြီး ပစ်ရဲကြတာပါ။
အခုလို သေနတ်နဲ့အုပ်စုလိုက် ဗြောင်ကျကျ မတရား စော်ကားလာတာတွေဟာ ပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်၊ ပြည်သူကို စော်ကားရဲလာကြတာတွေဟာ ပိုပြီး ဖြစ်ပျက်လာတယ်ဆိုတာ အခု ပဲခူးမြို့ မှာ ဖြစ်ရတဲ့ ကျောင်းသားငယ်လေး နှစ်ဦး အသက်ဆုံးရတဲ့ အဖြစ်က လက်တွေ့ ပြနေပါပြီ။
ပြည်သူ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့သူတွေက လက်နက်အားကိုး အုပ်စုအားကိုးနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ပစ်ခတ်ပြီး ပြည်သူကို ပြန်သတ်နေတာ ရင်နာစရာပါဘဲ။ ပဲခူးက ကျောင်းသားလေးနှစ်ဦး ဒီလို ရက်ရက်စက်စက် မတရားပစ်သတ်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို ကိုယ် မခံစားရသလို မနေကြပါနဲ့ ။ သတင်းတွေ ဖြစ်ပျက်မှု မှန်သမျှတွေကို စုံစမ်းပြီး ၀ိုင်းဝန်းဖေါ်ထုတ်ပေးကြပါ။ မတရားမှုလုပ်ရပ်တွေကို မသိသေးသူတွေ သိရအောင် လက်ဆင့်ကမ်းပြောဆိုပေးကြပါ။
ဒီ ပဲခူးမြို့အရေးအခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဖြစ်အပျက်မှန်ကို တရားဝင်ဖေါ်ထုတ်ပေးဖို့ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပေးကြပါ။ ကျောင်းသားငယ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မောင်အောင်သူဟိန်းနဲ့မောင်စိုးပိုင်ဇော်တို့ ကို ပစ်သတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ပဲခူး အခြေစိုက် ခလရ ၅၉ က ဗိုလ်ကြီး သိဒ္ဓိစိုးနဲ့ပစ်ခတ်သူ စစ်သားတွေကို ပဲခူးမြို့ သူမြို့ သားတွေ ရှေ့ မှောက်မှာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ ရှေ့ မှောက်မှာ လူသတ်မှုတရားခံများအဖြစ် ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးဖို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ တောင်းဆိုပေးကြပါ။
သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ မောင်အောင်သူဟိန်းနဲ့မောင်စိုးပိုင်ဇော်တို့ ရဲ့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ရင်နင့်အောင်ခံစားနေရတာတွေ ပဲခူးသူပဲခူးသားတွေ ကြေကွဲခံစားနေရတာတွေကို ကျွန်တော်တို့အားလုံးက စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံနဲ့ ဘဲ ရပ်တန့် မနေကြဘဲ လက်တွေ့ ကျကျ စုစည်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
(၁) ကျောင်းသားငယ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မောင်အောင်သူဟိန်းနဲ့မောင်စိုးပိုင်ဇော်တို့ ကို မတရားပစ်သတ်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်အမှန်ကို လက်ရှိ နအဖမှ ၀န်ခံထုတ်ဖေါ်ပေးပါ။
(၂) ကျောင်းသားငယ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မောင်အောင်သူဟိန်းနဲ့မောင်စိုးပိုင်ဇော်တို့ ကို ပစ်သတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ပဲခူး အခြေစိုက် ခလရ ၅၉ က ဗိုလ်ကြီး သိဒ္ဓိစိုးနဲ့ပစ်ခတ်သူ စစ်သားတွေကို ပဲခူးမြို့ သူမြို့ သားတွေ ရှေ့ မှောက်မှာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ ရှေ့ မှောက်မှာ လူသတ်မှုတရားခံများအဖြစ် ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးပါ။
(၃) နောက်နောင် စစ်တပ်နှင့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှ တရားဥပဒေမဲ့စွာဖြင့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအား ရိုက်ပုတ်ညဉ်းပမ်းခြင်း၊ အသက်သေဆုံးရသည်အထိ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းများ မလုပ်ရန် တာဝန်ယူပေးရမည်။
ဒီတောင်းဆိုချက် (၃) ချက်ကို လက်ရှိ နအဖမှ မဆောင်ရွက်ပေးပါက မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအနေဖြင့် နအဖမှ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ရပ်များအားလုံးအား သပိတ်မှောက်ဆန့် ကျင်ရန်နှင့် ထိရောက်သော တုန့် ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာပြည်ရှိ လူကုန်ကူးသူ အုပ်စုတို့သည် အထက်တန်းကျောင်းသူများကိုယခုပစ်မှတ်ထားနေပြန်သည်..
လူကုန်ကူးသူအုပ်စုတို့သည် အထက်တန်းကျောင်းများကိုပင် ပစ်မှတ်ထား ရည်ရွယ်လာနေကြကြောင်း သိရသည်။ လူကုန်ကူးသူ အုပ်စုများသည် ကျောင်းသူလေးများကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ချဉ်းကပ်၍ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ လူကုန်ကူးရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းတို့တွင် လုပ်ဆောင်လာနေ ကြသည်။ “ကောင်မလေးက တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း တက်နေတယ်။
သူနဲ့အတန်းဖော်ကောင်မလေးက သူ့မိဘတွေဟာ အရင်းမဟုတ်ဘူး။ မွေးစားမိဘတွေလို့ ပြောတယ်။ မိဘအရင်းက ဘယ်မှာနေတယ်ပေါ့။ အဲဒီလိုပြောနေတော့ တစ်နေ့မှာကောင်းမလေးက အိမ်ကပျောက်သွားတယ် ဆယ်ရက်လောက်ကြာတယ်။ မိဘတွေက စိတ်ပူပြီးရှာကြတာပေါ့။ ကောင်မလေးကဖုန်းဆက်တယ်။ မိဘတွေက ပြန်လာပါဆိုမှ အမေနေမကောင်းလို့ ခဏတော့ လာကြည့်မယ်ဆိုပြီး ပြန်လာတုန်း မိဘတွေကပြန်မလွှတ်ဘဲ ထားလိုက်ရတာ” ဟုအဆိုပါ ကျောင်းသူအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ကျောင်းသူနည်းတူ အခြားတက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကျောင်းသူတစ်ဦးသည်လည်း နှစ်ရက်ခန့်ပျောက်သွားခဲ့ပြီး ပြန်လည် တွေ့ရှိချိန်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သည့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပြီး ယင်း၏ မိဘအသိုင်းအဝိုင်းကမူ ဆေးထိုးခံထားရသည်ဟု ယူဆလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ ကျောင်းသူနှစ်ဦးစလုံးသည် မိဘတို့၏ အပူတပြင်းတိုင် ကြားမှုကြောင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာကြခြင်း ဖြစ်ပြီး မိဘတို့ကမူ လူကုန်ကူးသူတို့၏ လုပ်ရပ်ဟု ယုံကြည်လျက်ရှိကြောင်း Flower News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, September 07, 2010 Links to this post
ကျောင်းသားလူငယ် နှစ်ဦး သေဆုံးရမှု ပဲခူးမြို့နယ်လူထုမကျေနပ်၍ မနေ့က ရင်ခွဲရုံသို့စုရုံးရောက်ရှိ
photo။ ။ Freedomnewsgroups
video ဖိုင် အား ကိုဒေါင်းမာန်ဟုန် ကိုကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်.။
ပင်အိုရွက်နုတို့၏ အနီးအဝေး နှင့် ပံ့ပိုးမှုကို ထပ်မံပံ့ပိုးကြ
“သင်္ခါရတဲ့ ရပ်ထဲရွာထဲ ရပ်ကွက်ထဲဝယ် … ဖြစ်နေသမျှကို ပြောရအုံးမယ် xxx သချိုင်းလက်မှတ် ထွက်ဖို့အရေး … ဟိုမေး ဒီမေး … ဟိုပေး ဒီပေးနဲ့ xxx ရပ်ရေး ရွာရေး သာရေး နာရေးအတွက် … လုပ်စားနေတဲ့ ပွဲစားတွေ”
အထက်ပါ သီချင်းစာသားသည် တေးရေး - ကိုဦး ရေးသားကာ တေးဆို - Cyclone ဟစ်ဟော့ အဖွဲ့သားတို့က နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အတွက် သီဆိုပေးထားသော “ကိုယ်ပြုသောကံ ပဲတင့်သံ ကိုယ်ထံပြန်လာမည်” အမည်ရှိ Hip Hop တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်မှ စာသားတချို့ ဖြစ်သည်။
ယင်း သီချင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ နာရေးကိစ္စရပ်များတွင် မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်သော လုပ်ရပ်ကို လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြသော အသုဘ ပွဲစားများ အကြောင်းကို အများပြည်သူ သိရှိအောင် ဖွင့်ချ ရေးဖွဲ့ထားသော ဟစ်ဟော့ တေးသီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ တေးသီချင်းအတွက် လိုအပ်သော စကားပြောအပိုဒ်များအား နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)ရှိ ကော်မတီဝင်များ၊ အသင်းသူ/သားများတို့မှ စကားလုံးများဖြင့် အသံသွင်း၍ ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
“ဘီယာ ကြယ်သီး ပန်းကုံးတွေနဲ့ မုသား သူခိုး ကြီးစိုးနေမြဲ xxx ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း သတ်ဖြတ်ကြလဲ … အတ္တတွေနဲ့ ငါးပါးမှောက်ဆဲ xxx ကိုယ့်သီလကိုယ်လုံ ယသပါပဲ … မင်းရဲ့သမိုင်း ၀ါးတားတားနဲ့ xxx ကိုင်းကြီးကြီးမှာ နားစမ်းပါဟဲ့ xxx အနိစ္စသဘောနဲ့ ကိစ္စချောမယ် xxx အကုသိုလ်တွေ မယူသွားပါနဲ့ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေး ယသပါပဲ”
အထက်ပါ သီချင်းစာသားသည် တေးရေး - ကိုဦး၊ ကျော်သူ ရေးသားကာ တေးဆို - ကိုဦးနှင့် Cyclone ဟစ်ဟော့ အဖွဲ့သားတို့က နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အတွက် သီဆိုပေးထားသော “ဟိတ်” အမည်ရှိ Hip Hop တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်မှ စာသားတချို့ ဖြစ်သည်။
ယင်း သီချင်းအတွက် စကားပြော စာပိုဒ်များအတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူက ကိုယ်တိုင် စကားလုံးများဖြင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် အသံသွင်း၍ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ လူမှုရေး ပေးဆပ်မှုများအား အများပြည်သူတို့ထံ လျှင်မြန် သော အသိဖြင့် သိရှိနားလည်ရန်၎င်း၊ အယူသည်းမှုများ ပပျောက်စေရန် သင်ခန်းစာပေးသော အသိတရားပေးသော စကားလုံးများဖြင့် လျှင်မြန်စွာ အသိတရား ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ မိမိတို့ တတ်စွမ်းသော ဂီတပညာတို့ဖြင့် ပေးဆပ်ကြသော ဂီတပညာရှင်တို့၏ ဂီတသံစဉ်များတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ကလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်း ပံ့ပိုးပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့ အား ပံ့ပိုးပေးသူတို့အား မိမိတို့ကလည်း ထပ်မံ၍ပံ့ပိုးကာ လူမှုရေးပေးဆပ်မှုအင်အားကို မြှင့်တင်လိုက် ရပါသည်။
ယနေ့ ၆.၉.၂၀၁၀ (တနင်္လာ) နေ့တွင် “ပင်အိုရွက်နု” သင်တန်းဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ထားသော လူကြီး ပန်းချီသင်တန်းကို ဆရာ ဦးဝင်းကြည်နှင့် ဆရာ ဦးလှထွန်းအောင်တို့မှ မအားမလပ်သည့် ကြားမှ စေတနာထားကာ ဒုတိယသင်ခန်းစာအဖြစ် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် လာရောက်၍ သင်ကြားပြသခဲ့သည်။ ယင်း ဒုတိယအနေ့ ပန်းချီသင်တန်းတွင် သင်တန်းသူ/သား အသစ်များ ထပ်မံ၍ တက်ရောက်ကြသလို သင်တန်းသား ဟောင်းများကလည်း မလျှော့သောဇွဲဖြင့် ကြိုးစားကာ သင်ယူခဲ့ကြသည်။ သင်တန်း ပထမနေ့ ပို့ချချက်တွင် ခဲချွန်နည်း၊ ခဲတံကိုင်ပုံ ကိုင်နည်း၊ လိုင်းများရေးဆွဲခြင်း တို့ကို သင်ကြားပေးခဲ့သလို ယနေ့ ဒုတိယပို့ချချက်တွင် အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ အနီးအဝေး၊ အထားအသို များကို ပို့ချခဲ့သည်။
ရပ်ကွက်ကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲရုံး ဆေးမှုတ်ကာ NO အရေးခံရတာ မည်သူလက်ချက်လည်း။
စက်တင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ (၂) ရပ်ကွက် သုဇိတာလမ်းမကြီးပေါ်တွင် တည်ရှိနေသော ရယက၊ ရဲကင်း၊ ကြံ့ဖွတ်တို့တွဲလျှက်ရှိသော ရယကရုံးတွင် စိုက်ထူထားသော ရပ်ကွက်ကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲရုံး ဆိုင်းဘုတ်သည် ကြတ်ခြေခက်၍ “NO” ဟု ဆေးမှုတ်ခံခဲ့ရပါသည်။
ထိုသို့ ဆေးမှုတ်ခံထားရသော ဆိုင်းဘုတ်အား အာဏာပိုင်များမှ မနက် (၇) နာရီခန့်တွင် ရပ်ကွက်လူကြီးအချို့ မှ သိရှိကာ မည်သူမှ မသိအောင် အဆိုပါ ဆိုင်းဘုတ်အား ဖြုတ်ချပြီး အသစ်ပြောင်းရန် အားထုတ်ခဲ့သော်လည်း မြို့နယ်အမာခံသတင်းသမားတစ်ဦးမှ ထောက်လှမ်ရေးဌာနများအား အကြောင်းကြားခဲ့သဖြင့် မြို့ နယ်မှ တိုင်းအဆင့်အထိ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များရောက်ရှိလာပြီးမှ အဆိုပါ ဆိုင်းဘုတ်အား နောက်နေ့စက်တင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့ တွင် ဓါတ်ပုံရိုက်ကာ ဖြုတ်ချခဲ့ကြပါသည်။
ထိုကဲ့သို ရပ်ကွက်ကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲရုံး ဆိုင်းဘုတ် ဆေးမှုတ်ခံရသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကြက်ခြေတ်ခတ် ဆေးမှုတ်ကာ NO စာလုံးရေးခြင်းမှာ ရယက၊ ရဲကင်း၊ ကြံ့ဖွတ်တို့ပူးတွဲထားသော ရုံးဖြစ်သဖြင့် ၄င်းတို့ အချင်းချင်း အာဏာပြိုင်မှုများ ရှိနေခြင်းကြောင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်နေရခြင်းအား မလိုလားသောကြောင့် ယခုလို ရေးသားခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်း သုံးသပ်သူများ ရှိနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်တွင် သမီးအရင်းဖြစ်သူကို တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ အဓမ္မထိမ်းမြားစေရန် ရောင်းချမှုများဖြစ်ပွားခဲ့
၂၀၀၆ ခုနှစ် လူကုန်ကူးမှုတား ဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ စတင်ကျင့် သုံးချိန်မှယခုထိ ပထမဆုံးအနေဖြင့် သမီးအရင်းဖြစ်သူကို မိခင်ဖခင်တို့ က တရုတ်နိုင်ငံသို့ အဓမ္မထိမ်းမြားစေရန် ရောင်းချမှုများ ရှမ်းပြည်နယ် တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၊ နိုင်ငံဖြတ်ကျော် မှုခင်းဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင် ပိုင်း သီပေါမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာတစ်ရွာနေ ဆင်းရဲချို့တဲ့သူ တောင်သူ မိခင်တစ်ဦး (သားသမီး ခြောက်ယောက်မိခင်)သည် လူကုန်ကူးသူ လူပွဲစားများ ဖြစ်ကြသည့် မအေးလီ၊ မအေးလူတို့နှင့် အသိအကျွမ်းဖြစ် ကာ သမီးဖြစ်သူ မ ........ ၁၈ နှစ် အား တရုတ်နိုင်ငံသို့ အဓမ္မ ထိမ်းမြားရန်အတွက် ရောင်းချရန် တရုတ် နိုင်ငံသားများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ၀မ်တိန်မြို့တွင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ ယင်းနောက် မိခင်ဖြစ် သူက တရုတ်ငွေကြေးယွမ် ၁၅၀၀၀ တောင်းသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် ယွမ် ၁၃၀၀၀ ဖြင့်ဈေးတည့်သွားကာ သမီးအရင်း ဖြစ်သူ မ......... အား ရောင်းချလိုက်သည်။
ယင်းနောက် ရွာသို့ပြန်ရောက်သောအခါ တစ်ရွာတည်းနေ ဆင်းရဲ ချို့တဲ့သူ တောင်သူဖခင်တစ်ဦး (သားသမီးသုံးယောက်ဖခင်)ကလည်း ယင်းအကြောင်း သိရှိသွားကာ ၎င်း ၏သမီးဖြစ်သူ မ .......... ၂၂ နှစ်ကို လည်း ရောင်းချလိုသည်ဟု ဆိုသဖြင့် ယွမ်ငွေ ၇၀၀၀ ဖြင့် ရောင်းချခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အသက် အရွယ်အရ ပထမ ရောင်းချခံရသူ မ..........ကဲ့သို့ ယွမ် ၁၃၀၀၀ မရဘဲ ယွမ် ၇၀၀၀ သာရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟုလည်း သိရသည်။
ယင်းတို့နှစ်ဦးကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ ၀မ်တိန်မြို့မှ ပေါက်ဆန်းမြို့သို့ ခေါ် ဆောင်သွားရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက စစ်ဆေးရေးဂိတ် တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး မေလ ၂၁ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"ဒီအမှုက ၂၀၀၆ ခုနှစ်လူကုန် ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေစ တင်ကျင့်သုံးပြီးစ ကာလက အမေက သမီးကို၊ အဖေက သမီးကိုရောင်း တယ်ဆိုတာ ပထမဆုံးပါ။ ဘ၀ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့သူတွေကို လူ့အဖွဲ့ အစည်း (Community) က စောင့်ရှောက်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်"ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၊ နိုင်ငံဖြတ် ကျော်မှုခင်းဌာနမှ ဒုတိယရဲမှူးကြီး ရာလျန်မုန်းက ပြောကြားသည်။
ထို့ကြောင့် သမီးအရင်းနှစ်ဦး ကို အဓမ္မထိမ်းမြားစေရန် ရောင်းချ ခဲ့သည့် မိခင်၊ ဖခင်နှစ်ဦးနှင့် လူပွဲ စားများဖြစ်သော မအေးလီနှင့် မ အေးလူတို့ကို လူကုန်ကူးမှုတားဆီး ကာကွယ်ရေးဥပဒေအရ အရေးယူ ထားပြီး လူကုန်ကူးခံရသူနှစ်ဦးကို လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်း ပေး၍ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး ပညာပေး ခြင်းများပြုလုပ်ကာ ရပ်ရွာသို့ ပြန် လည်အပ်နှံခဲ့ကြောင်းသိရသည် ဟုeleven ဂျာနယ် မှာဖော်ပြထားပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, September 06, 2010 Links to this post
မူဆယ်-မန္တလေး ခရီးသည်တင်မှန်လုံယာဉ် တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွား
မူဆယ်-မန္တလေး ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်တစ်စီးသည် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခန့်က ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နမ့်ကွတ်ရွာအနီးတွင် လမ်းချော်၍ လမ်းဘေး ပေ ၃၀ ခန့်ရှိ ချောက်ထဲသို့ထိုးကျ တိမ်းမှောက်ခဲ့ရာ ယာဉ်ပေါ်ပါခရီးသည် ၃၁ ဦးအနက် အမျိုးသားနှစ်ဦး၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦး စုစုပေါင်းသုံးဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ခရီးသည်တင်မှန်လုံယာဉ်သည် မူဆယ်မြို့မှ မန္တလေးမြို့သို့အဆင်း နမ့်ကွတ်ရွာ မိုင်တိုင်အမှတ် ၂၂၇/၂ အနီးတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင်မောင်းနှင်လာသောယာဉ်အား ရှောင်တိမ်းစဉ် လမ်းချော်၍ လမ်းဘေးရှိ ချောက်ထဲသို့ ထိုးကျတိမ်းမှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ခရီးသည်သုံးဦးသေဆုံးပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၁ ဦးကို ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိသည်။ ယာဉ်မောင်း ---- (၂၅ နှစ်၊ လားရှိုးမြို့နေသူ)အား ကွတ်ခိုင်ရဲစခန်း၌ (ပ) ၆၅/၂၀၁၀ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၃၇/၃၃၈/၃၀၄-က ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်ဟု eleven ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်.။
မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ပြုလုပ်သူများ လိုအပ်သည့် ပုံစံ (၁၉) ပြုလုပ်ရာတွင် ပွဲစားများကို ယုံကြည်အပ်နှံမိခြင်းကြောင့် ငွေလိမ်ခံရသူများ ရှိနေ
မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ပြုလုပ်သူများ လိုအပ်သည့် ပုံစံ (၁၉) ပြုလုပ်ရာတွင် မိမိကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားခြင်း မပြုဘဲ ပွဲစားများအား ယုံကြည်အပ်နှံမိခြင်းကြောင့် ငွေလိမ်ခံရသည့် ဖြစ်ရပ်များ ရှိနေသည်ဟု ပုံစံ (၁၉) ပြုလုပ်ရန် လာရောက်ကြသူ များထံမှ စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
အများစုမှာ မိမိတို့ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်၌ အလုပ်ချိန် ပျက်ကွက်မည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ပွဲစားများအား အပ်နှံမိရာမှ ငွေလိမ်တောင်းကာ ပြီးဆုံးသည်အထိ ပြုလုပ်ပေးခြင်း မရှိဘဲ စာရွက်စာတမ်းများပင် ပျောက်ဆုံးသွားသည့် ဖြစ်ရပ်များပင် ရှိနေသည် ဟု ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသူ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
''ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဆိုတော့ ကိုယ့်အလုပ်ပျက်မှာ စိုးလို့ ပွဲစားနဲ့ပုံစံ (၁၉) လုပ်ခိုင်းတယ်။ ပွဲစားက အကုန်လုံးကို ငွေကျပ်တစ်သောင်း ကျမယ်လို့ ပြောတယ်။ ပြီးတော့ အစအဆုံး ကိုယ်ကပဲ လိုက်လုပ်ရတဲ့ အပြင် ပွဲစားကို ကိုယ့်စာရွက်စာတမ်းပါ ပေးမိလို့ အခု အစကနေ အကုန် ပြန်လိုက်လုပ်နေရတယ်''ဟု အဆိုပါ အမျိုးသမီးက ပြောပြခဲ့သည်။
ပုံစံ (၁၉) ပြုလုပ်ရာ ရုံဌာန၀င်ပေါက်၌လည်း အမှန်တကယ် ပြုလုပ်ရန် လာရောက်သူများကိုသာ ၀င်ခွင့်ပြုပြီး ဟုတ်၊ မဟုတ်ကို သေချာစွာ စိစစ်ပြီးမှသာ ၀င်ခွင့်ပြုကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ပုံစံ(၁၉) ပြုလုပ်ရာ၌ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်သို့ ငွေပေးသွင်းရာတွင်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ တို့သို့သာ လျှောက်ထားပေးသွင်းမှု ပိုများကြောင်း ပုံစံ (၁၉) ပြုလုပ်ရန် လာရောက်ကြသူများထံမှ သိရသည်ဟု eleven ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်.။
ခေါ်ဆိုခထက်ဝက်သက်သာသည့် VOIP ၀န်ဆောင်မှုသစ် ပြည်တွင်...
မြန်မာပြည်တွင်းအများပြည်သူနေရာများတွင် အင်တာနက် လွှ...
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဖက်နယ်စပ် မောင်းတောမြို့နယ်စြံ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဒုက္ကဌ ဦးတင်ဦး ညီဖြ...
ဘုန်းကြီးဦးဥတ္တ (ခေါ် ) ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ (ခေါ် ) ဘိက္ခ...
စစ်အာဏာရှင် လူသတ်သမားဦးသန်းရွှေ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ ...
ဒီနေ့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာအ...
မြန်မာပြည်ရှိ လူကုန်ကူးသူ အုပ်စုတို့သည် အထက်တန်းကေ...
ကျောင်းသားလူငယ် နှစ်ဦး သေဆုံးရမှု ပဲခူးမြို့နယ်လူထ...
ပင်အိုရွက်နုတို့၏ အနီးအဝေး နှင့် ပံ့ပိုးမှုကို ထပ...
ရပ်ကွက်ကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲရုံး ဆေးမှုတ်ကာ NO အရေးခံ...
ရှမ်းပြည်နယ်တွင် သမီးအရင်းဖြစ်သူကို တစ်ဖက်နိုင်ငံသ...
မူဆယ်-မန္တလေး ခရီးသည်တင်မှန်လုံယာဉ် တိမ်းမှောက်မှုဖြ...
မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ် ပြုလုပ်သူများ လိုအပ်သည့် ...
အန္တိမဈာပနလား … တစ်သောင်းပြည့်လား
မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံခြားသားများ စင်ကာပူတွင် အလုပ်...
မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ အပြစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ပျက်ပြယ်ပြီးလာ...